JINGHPAW KASA: မဆွမ်းလွတ်ရွယ်ဂျားအား ဗိုလ်ကြီးသက်ဖြိုးဇော်နှင့် အဖွဲ့ အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်
မဆွမ်းလွတ်ရွယ်ဂျားအား ဗိုလ်ကြီးသက်ဖြိုးဇော်နှင့် အဖွဲ့ အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်
ကချင်ပြည်နယ် ဆဒုံးမြို့နယ်ခွဲနှင့် မော်ဂရမ်ကျေးရွာကြားရှိ လုထောင်ကျေးရွာမှ အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် မဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျားအား ဗိုလ်ကြီးသက်ဖြိုးဇော် (ခ) ဇော်ထက်အောင် နှင့် အခြား တပ်မတော်သား (၂) ဦးတို့မှ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက် နံနက် (၉း၀၀) နာရီတွင်အုပ်စုလိုက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Sumlut Roi Ja,a15 year-old girl, was gang raped by Capt. Thet Hpyo Aung, also known as Capt. Zaw Htet Aung and two other Burmese army soldiers from 116th Light Infantry Regiment (LIR) at Lu Htawng village, located between Sadung and Mau Gyam village, on Oct 30 at9am. She was handed back to her parents in Lu Htawng village yesterday evening, reportedalocal source.
The battalion commander of 116th LIR is Lt. Col. Min Kyin San. 116th LIR isamobile battalion under Sagaing-based 33rd Light Infantry Division led by Col. Myit Maw.
Mi Sorn said...
ကျနော်အဆိုပြုချင်တာ ဖြစ်တဲ့နေရာကို တနိုင်ငံလုံးသိဖို့ လိုအပ်ရင် လိပ်စာအပြည့်အ၀ ရေးပေးစေချင်တယ်။ မြေပုံကြည့်ပြီးမှ သတင်းဖတ်ရရင်တေမဖြစ်သေးဘူးလေ။ ဥပမာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင် မံစီမြို့နယ် မုန်းဒိန်ပါကျေးရွာ အဲဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပါ။
ကျနော်တို့လို နယ်မြေမသိတဲ့လူတွေအတွက် မြေပုံအဆင်သင့်မရှိတဲ့အတွက် လိပ်စာကိုတော့ အပြည့်အစုံရေးထည့်ပါလို့ တောင်းဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆတုံမြို့နယ်ခွဲက ဘယ်မှာ ရှိလဲ။
njaw sai law dai nam kaw sha gasat rawng taw nga yang gaw SA WA ni gaw shang wa dik dik anhte gaw hting nut dik dik nlaw nla ai hte sha ning hkap taw nga ai wa i.
ဘယ်လိုကောင်တွေလဲကွာ မိန်းကလေးတွေ့ လို့ မရ အနှိင်ကျင့်ချင်ကြတဲ့ မုဒိန်းခေါင်းဆောင်သိန်းစိန်ကိုအရင်သတ်မှဖြစ်တော့မယ်။
marann nan said...
ကြားရတာ နှလုံးမသာယာ လိုက်တာ။ မြန်မာစစ်တပ်တွေ ကမ္ဘာ မှာ မုဒိန်းတပ် ဆိုပြီး မော်ကြွားနိုင်ပါပြီ ။ တတ်နိုင်တာလေးနဲ့ ရှိတဲ့ ဘောင်းဘီအောက်က သေနတ်လေးနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်နေကြရှာတဲ့ မြန်မာ မုဒိန်းစစ်တပ်ကကောင်တွေရဲ့ ငယ်ပါ ပုတ်ပြီး ပြတ်ကျသွားပါစေ တော်